देशमा अनलाईन कक्षा सञ्चालनलाई सुहाउँदो वातावरण छ?-बाशुदेव अधिकारी – NamoBuddha Khabar
देशमा अनलाईन कक्षा सञ्चालनलाई सुहाउँदो वातावरण छ?-बाशुदेव अधिकारी
शनिबार, बैशाख १३, २०७७ | १२:०९:५६ |
– वाशुदेव अधिकारी, शंकरदेव क्याम्पस
त्रिभुवन बिश्वविद्यालयले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्न लागेकोमा धेरै खुसी लागेको छ। आज बिश्व IT को युगबाट गुज्रिरहेको बेला त्रिविले यो किसिमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्नु एकदमै राम्रो हो। तर, प्रश्न के छ भने के हाम्रो देशमा अनलाईन कक्षा सञ्चालनलाई सुहाउँदो वातावरण छ? त्रिविले यसको बारेमा अनुसन्धान गरेरै यो निर्णय गरेको भए अब त्रिविलाई मेरा प्रश्नहरु :
१) के त्रिविका सबै बिद्यार्थीको घरघरमा minimum 20mbps को ईन्टरनेट कनेक्सन छ? कि सबै विद्यार्थी उच्च अायस्रोत भयकाहरु मात्रै छन?
२) NTC र Ncell ले फ्रि डेटा ! यदि यसो हो भने पनि देशका मुख्य सहर अनि जिल्ला सदरमुकामको २/३ कि.मि. को रेञ्मा मात्रै यिनिहरुको 3G र 4G चल्नेहुन, अझ हिमाल पहाडका केहि ठाँउमा 2G पनि चल्न गाह्रो छ। यो कटु सत्य हो। अँ अनि यस्तामा विद्यार्थीले जति डेटा पाए नि के काम?
३) के त्रिविको अनुरोधमै यत्रो बर्षदेखि नसेकेको १/२ हप्तामै NTC र Ncell ले नेपालका सबै क्षेत्रमा 4G सेवा विस्तार गर्न सक्छन?
४) फ्रि डेटा पाएनन् भने के त्रिविका सबै विद्यार्थीहरु डेटा किनेर पढ्न सक्नेछन? यसरी दुरदराजका विद्यार्थीलाई अार्थिक तथा मानसिक यातना दिनु भन्दा स्वअध्यन गरेर बस भने हुदैन?
५) के गाउँ घरमा भएका विद्यार्थी त्रिवि अन्तर्गत पढ्दै नपढ्ने मात्रै छन? यदि यसो हो भने त्रिविका आंगिक क्याम्पसको वास्तविक अाँकडा कति हो?
६) के त्रिविको विद्यार्थी प्रतिको दायित्व अाफ्नो पाठ्यक्रम समयमै सकेर परिक्षा लिनु मात्रै हो?
७) के त्रिविका अांगीक क्याम्पस स्वयंमले High Speed ईन्टरनेट सहितको Laptop सबै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउन सक्छ ? नियमावलि मा त उपलब्ध गरा भन्या छ । अनि के हाम्रा विद्यार्थीहरुमा उक्त सेवा लिन सक्ने हैसियत पनि छन ?
८) के युवा उध्यमसिलताका बारेमा यो समयमा सबैलाई जानकारि दिन मिल्दैन?
९) के कोभिड १९ का तनाबको बेला विद्यार्थीमा झन तनाब बडाउनु नै हाम्रो शिक्षा निति हो?
१०) यो महामारिको बेला के त्रिविले रचनात्मक कार्यक्रमहरु (साहित्य, ईतिहास, मनोबिज्ञान अादिअादि) रेडियो वा टेलिभिजनका माध्यमबाट सन्चालन गर्न सक्दैन?
११) के अन्तिम बिकल्प यहिनै हो?
१२) के स्नातक तहको Education, Humanity, Management मा BBS बिषय लिएर पढेकाहरु सबैको भविस्य चाहि खाडिमै छ? (यो चाहि सम्बन्धित क्याम्पसलाई प्रश्न)
उत्तर दिनुहोस् त ल ! सम्बन्धित निकायले ।